Japan Golf Tour | GO & GO Travels
ဂျပန်နိုင်ငံ ကို Golf ကစားရင်း လည်ပတ်မည့် GO & GO Travels ၏ ဂျပန် Golf Tour အစီအစဉ်
ခန့် မှန်းချေထွက်ခွါမည့်နေ့ ရက်များ - 1st Feb/14th Mar/4th April 2016
ဂေါက်ရိုက်ကစားမည့်မြို့- တိုကျို – ဖူဂျီ
အသုံးပြုမည့်လေကြောင်းလိုင်း - ဗီယက်နမ်လေကြောင်း
အသုံးပြုမည့် ဧည့်လမ်းညွှန် - ဂျပန် – အင်္ဂလိပ်စကားပြော
ည ၇ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဠြ လေကြောင်းလိုင်း ဖြင့်ထွက်ခွါပါမည်။ ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင်၊ ဗီယက်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင့်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပြီး၊ ထိုလေဆိပ်မှ နောက်တစ်နေ့နံနက် ၁၂ နာရီ ၃ဝ မိနစ်တွင်ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာရီတာလေဆိပ်သို့နံနက် ၇ နာရီတွင်ရောက်ပါမည်။
Day 1 ဂျပန်နိုင်ငံ သို့ ရောက်သည့်နေ့( နေ့ လည် / ညနေစာ )
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာရီတာလေဆိပ်သို့ ရောက်လျှင်လေဆိပ်မှ check out လုပ်ပြီးနောက် မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ လေဆိပ်မှထွက်ခွါကာ၊ လေဆိပ်မှ တဆင့် Asakusaနှင့် စည်ကားလှသော Nakamise Street သို့လေ့လာလည်ပတ်ကြပါမည်။ ( ၁၂းဝဝ ) အချိန်တွင် နေ့ လည်စာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက၊် နာမည်ကျော် Tokyo Sky Tree သို့ ဆက်လက်လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် Shinjukuတွင် မိမိတို့လိုချင်သော ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်၊ နာမည်ကျော် ဂေါက်ပစ္စည်းမျာကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလိုက်လံ ပို့ ဆောင်ပေး မှာဖြစ်သောကြောင့်၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဈေးဝယ်ပြီးနောက် Ginza သို့ သွားရောက်ကာ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် တည်းခိုမည့် ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်သို့ ပို့ဆောင် check in လုပ်ပေး ပါမည်။ တိုကျို တွင် ညအိပ် ပါမည်။ Hotel : Rose Garden Shinjuku *** ( or ) Similar.
Day2ဂေါက်သီးရိုက်စတင်ကစားမည့်နေ့့ ( နံနက်/- / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက၊် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ဂေါက်ရိုက် ကစားရန်၊ FUJI Country Club သို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ( ၁၈ ) ဂေါက်ရိုက်ကစားပြီးနောက်၊ မိမိတို့ဧည့်လမ်း ညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် ညနေစာ ကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Hatoya ***near Tokyo & Mt Fuji ( or ) Similar.
Day3ဖူဂျီတောင်- တိုကျို ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက၊် (ဝ၉းဝဝ)တွင်နာမည်ကျော် ဖူဂျီတောင်ကို လည်ပတ် ပါမည်။ လှပသောရှုခင်းများကို ဖူဂျီတောင် Level5မှနေကြည့်ရှုခံစာပြီး၊ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ များရိုက်ကြပြီးနောက်၊ ဖူဂျီ ဧည့်ခန်းဆောင်သို့ဝင်ရောက်အနားယူပါမည်။ ပြီးနောက် Oshinohsakkai ဝင်ရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ နေ့လည်စာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ( ၁၄းဝဝ ) အချိန်ခန့် တွင် နာမည်ကျော် Outlet Mall တစ်ခုဖြစ်သော Gotenba Outlet Mall ကိုဈေးဝယ်ရန်လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ် များကိုဈေးသက်သာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက် Odaiba သို့ လည်ပတ်ရန်ဆက်လက်ပို့ ဆောင်ပေးပြီး၊ ညနေ စာသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် တိုကျိုသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Rose Garden Shinjuku *** ( or ) Similar.
Day4ဒုတိယအကြိမ်ဂေါက်သီးရိုက်ကစားမည့်နေ့့ ( နံနက်/- / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက၊် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ဂေါက်ရိုက် ကစားရန်၊ Narashino Country Club King Queen Course သို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ( ၁၈ ) ဂေါက်ရိုက် ကစားပြီးနောက်၊ မိမိတို့ဧည့်လမ်း ညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် ညနေစာ ကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက၊် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ဂေါက်ရိုက် ကစားရန်၊ Narashino Country Club King Queen Courseသို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ( ၁၈ ) ဂေါက်ရိုက် ကစားပြီးနောက်၊ မိမိတို့ဧည့်လမ်း ညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် ညနေစာ ကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Rose Garden Shinjuku *** ( or ) Similar.
Day5တိုကျို - ပြန်လည်ထွက်ခွါမည့်နေ့့ ( နံနက်စာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက၊် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ဟိုတယ်တွင် check out လုပ်ပေးပြီးနောက်၊ နာရီတာလေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ တိုကျိုစံတော်ချိန် ၁ဝ နာရီတွင် လေယဉ်ထွက်ခွါပြီး၊ ဗီယက်နမ် လေဆိပ်ကို ၃ နာရီ ၅ မိနစ်တွင်ရောက်ကာ၊ ထိုမှတဆင့် ၄ နာရီ ၄ မိနစ်တွင် ပြန်လည် ထွက်ခွါကာ၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ညနေ ၆ နာရီ ၁ဝ မိနစ် တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
------------------ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဂေါက်တိုး ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါမည်။ -------------------
ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း ( US$ ) ဖြင့် ( တစ်ဦးလျှင်ကျသင့်သည့်ငွေများ )
Single Sup +
• Japan visa fee and International Air ticket & airport tax by Vietnam Air line
• လေဆိပ်အကြို / အပို့- မြန်မာစကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် Professional Local Tour Guide
•4Nights at3Star Hotel twin bed & Triple bed room
• Private ကားများ၊ သောက်ရေသန့် 
• Green Fees and Carry Fees for2Days Golf playing
• Laundry Service and Beverages & Tipping for guide, carry and driver
• လေယာဉ်အပိုပစ္စည်းခများ နှင့် Porter Charges ။ ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ
Remark : We haven’t taken room confirmation and International Air ticket, so tour cost will be subject to change prior notice.